Archive du 20170926
Hentitra ny SEG “Miala izay tsy mahavita azy”
Tsy toy ilay teo aloha fa dia mazoto manome fanazavana amin’ny mpanao gazety mikasika ny tontolon’ny tsy fandriampahalemana misy amin’izao fotoana eto amin’ny firenena ny jeneraly Girard Randriamahavalisoa, sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria na ny SEG vaovao.
Nitsidika am-pomba fanajana ny minisitry ny raharaham-bahiny Henri Rabary Njaka teny amin’ny birao fiasany teny Anosy omaly ny lehiben’ny delegasionin’ny Vondrona Eoropeanina eto Madagasikara Antonio Benedito Sanchez.
Hery Rakotomanana “Mila mahaleotena tanteraka ara-bola ny CENI”
Tsy mora ny mikarakara fifidianana, hoy ny Me Hery Rakotomanana filohan’ny vaomieram-pirenena misahana ny fifidianana (CENI) tany Mahajanga ny sabotsy teo nandritra ny fihaonany tamin’ireo tompon’andraiki-panjakana sy ny firaisamonim-pirenena tany an-toerana.
Lalam-baovao By Pass – Marais Masay Ho vita amin’ny 2020
Nampahafantarina omaly tetsy amin’ny minisiteran’ny fitaterana etsy Anosy ny tohin’ny tetikasa fanamboarana ny lalam-baovao mampitohy ny By Pass amin’ny Marais Masay.
Misavorovoro i Betroka Nampidirina am-ponja ny ben’ny tanàna teo aloha
Notanana am-ponja vonjimaika ny ben’ny tanàna teo aloha tany amin’ny kaominin’i Betroka Faritra Anosy, Atoa Jocelyn, noho ny fanelezana tsaho ampahibemaso nilaza fa ao ambadiky ny tsy fandriampahalemana miseho any Betroka ankehitriny ny depiote Randrianasolo Jean Nicolas voafidy tany an-toerana.
Kaominina Ivato Nomena fitaovam-pianarana ny zanaky ny mpiasa
700 mahery ireo zanaky ny mpiasan’ny kaominina Ivato nizaran’ny ben’ny tanàna Randrianarisoa Penjy fitaovam-pianarana omaly alatsinainy nandritra ny fananganan-tsaina maraina fanao isaky ny alatsinainy.
Asa tanana Malagasy Lasan’ny Sinoa ny ankamaroan’ny akora
Misedra olana tanteraka ireo mpanao asa tanana eto amintsika amin’izao fotoana.
Resaka ady tany 70 sahady ny taratasy voarain’ny HAFARI
Tafakatra 70 isa sahady hatramin’ny omaly ireo taratasy fitarainana momba ny ady tany eto amintsika voarain’ny fikambanana HAFARI Malagasy.
Ady totohondry - Tompondaka nasionaly 2017 Mpilalao 11 no hisolotena an’i Matsiatra Ambony
Fantatra, araka ny vaovao voaray avy amin’ny filohan’ny ligy any an-toerana,
Fahombiazana tanteraka ilay lalao iraisam-pirenana nampitondraina ny anarana « Mazana 110 » notontosaina tao amin’ny kianja Tsarasaotra Antsirabe ny sabotsy 23 septambra lasa teo.
Edito Hanompo sa hisolelaka ?
Saika isan’andro dia ahenoana tsy fandriampahalemana manerana ny nosy. Ahenoana kolikoly,
Toamasina Olona 2 indray no matin’ny pesta
Efa nandalo tany Toamasina ny ekipan’ny “institut pasteur” sy ny ekipan’ny “OMS” Antananarivo, nanao fanadihadiana ifotony sy nanao fitiliana ny tena zava-nisy marina ny herinandro lasa iny.
Faritra mena Ambatondrazaka Tsy mbola hita popoka ireo gadra tafatsoaka
Hentitra dia hentitra ny fitandroana ny filaminana sy ny fanaraha-maso ireo olona rehetra mivezivezy any Ambatondrazaka sy ny manodidina amin’izao fotoana.
Kaominina Andina Ambositra Hiara-kiasa ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana
Tontosa soa aman-tsara omaly tany amin’ny kaominina ambanivohitra Andina, distrikan’Ambositra ny fivoriambe faharoa amin’ity taona 2017 ity notarihin’ny ben’ny tanàna ny dokotera Rakotozandrindrainy Raphael.
Navoaka tamin’ny fomba ofisialy omaly tetsy amin’ny sekoly ambony momba ny fitantanana raharaham-panjakana (ENAM) eny Androhibe ireo 48 mianadahy niofana momba ny fananan-tany teo anivon’ity sekoly ambony ity.